ပြောင်းလဲခြင်းပြောင်းလဲခြင်းအလုပ်များကိုAltınkayı Boulevard မှစတင်သည် - RayHaber
Homeတူရကီအရှေ့ Anatolia ဒေသကြီး44 MalatyaChange Transformation Works Altınkayı Boulevard မှစတင်သည်။
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 44 Malatya, အရှေ့ Anatolia ဒေသကြီး, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, တူရကီ 0
Altinkayisi Boulevard လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်ကိုစတင်ခဲ့သည်။
Malatya Metropolitan Municipality သည် Tecde နှင့်Maştiလမ်းဆုံကိုဆက်သွယ်ပေးသော Malatya တွင်အကြီးဆုံး Boulevard ဖြစ်သော Golden Apricot Boulevard တွင်ပြောင်းလဲခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ၌ပါဝင်သည်။
3.3 ကီလိုမီတာအရှည်၊ 50 မီတာအကျယ်သည် X Apricot Boulevard ၏အကျယ်အ ၀ န်းရှိ Metropolitan မြူနီစီပယ်၏နေရာကျသောနေရာတွင်ကျန်ရှိနေသော 1.1 ကီလိုမီတာအပိုင်းသည်အလုပ်များကိုခင်းခဲ့သည်။
မြို့တော်ဝန်မြို့တော်ဝန် Selahattin Gürkan၊ Golden Apricot Boulevard နှင့်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရလုပ်ဆောင်ရမည့်အလုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့သည်။ ဒုတိယအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးလတ်ဖ်အိုကီနှင့်ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများနှင့်ဌာနဆိုင်ရာမန်နေဂျာအချို့လိုက်ပါလာကြသည်။
လမ်းဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံညှိနှိုင်းရေးဌာနအကြီးအကဲ Mehmet Mert က၎င်းတို့သည် Golden Apricot Boulevard တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးကတည်းကမော်လမြိုင်ရှိမော်တော်ယာဉ်များကိုစတင်ဖွင့်လှစ်သည့် အချိန်မှစ၍ ယာဉ်အသွားအလာစတင်ခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကတ္တရာမတိုင်မီ PMT စီးရီးလုပ်နေပါတယ်။ 2.2 သည်တစ်နေ့တာအတွင်းအသွားအလာလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်ပေးလိမ့်မည်။ ”
Gürkan: ငါတို့ဥယျာဉ်သည် Landscaping ပြီးနောက် ပို၍ လှပသောအသွင်အပြင်ရှိလိမ့်မည်။
မြို့တော်ဝန် Selahattin Gürkanကသူတို့ဟာ Golden Apricot Boulevard ကို Malatya နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင်စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး၊3ထွက်ခွာသွားခြင်းနှင့်3ရောက်ရှိခြင်းကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏ Boulevard လမ်းကြောင်းများကိုစီစဉ်ခဲ့သည်။ အဖြစ်မကြာမီ 15 ရက်အဖြစ်ကျနော်တို့ကဒီမှာကတ္တရာအကျင့်ကိုကျင့်ပြီးပါပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အလုပ်၏အစနှင့်အပြီးသတ်ရန်အချိန်နှင့် ပတ်သက်၍ အထိခိုက်မခံပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုများတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားများအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မလိုလားပါ။ လမ်းဘေး၊ အလင်းရောင်၊ ရှုခင်းများ၊ အလယ်အလတ်အဆင့်အလုပ်များကိုမကြာမီစတင်တော့မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလယ်အလတ်အလယ်လတ်တွင်ရေမလိုအပ်သောသစ်ပင်များစိုက်ပျိုးခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နေသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Boulevard ဟာသာယာလှပတဲ့ရှုခင်းတွေနဲ့လှပတဲ့အသွင်အပြင်ကိုရရှိမှာပါ။
Golden Apricot Boulevard သည် Saray Bosna လမ်းနှင့် Fahri Kayahan Boulevard နှင့်ချိတ်ဆက်မည်ဖြစ်ကြောင်းအလေးအနက်ပြောကြားပြီးမြို့တော်ဝန်Gürkanက“ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Boulevard သည်Mhhlıdutလမ်းနှင့်ပေါင်းစည်းနေသည်။ အသွားအလာစီးဆင်းမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်Altınkayı-Güngör-Mıhlıdutလမ်းဆုံလမ်းဆုံ၌ကျွန်ုပ်တို့သည်လှပသောလမ်းဆုံကိုဖောက်ခဲ့သည်။ ဤဒေသ၏အကြီးမားဆုံး ၀ င်ရိုးမှာ Golden Apricot ဖြစ်ပြီးအနောက်ဘက်သို့ဖွင့်လှစ်လိုက်သော Saray Bosna လမ်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဆက်သွယ်သောအခါအရှေ့ - အနောက်လမ်းကြောင်းသို့သွားမည်။ ဤသည်မြို့ပြအသွားအလာကိုလက်ဝဲလမ်း၏အနောက်ဘက်ခြမ်းနှင့်အတူသက်သာစေလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Boulevard သည် South Belt လမ်း၏အဓိကဆက်သွယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီဒေသမှာလမ်းတွေအကုန်လုံးပြီးစီးသွားရင်ငါတို့နိုင်ငံသားတွေကအရမ်းကိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်။ ”
လမ်းကြောင်းအပေါ်Altıparmak Bursa ပြောင်းလဲမှု '' 06 / 11 / 2012 မျဉ်း Altepe အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ Bursa တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် T1 Altiparmak ဇာတ်စင်, Altıparmak 20 ရက်ပေါင်းပြီးစီးခဲ့ခံရဖို့အလုပ်၏မျက်နှာကိုနောက်ပိုင်းမှာလုံးဝပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဤကာလ၏ပေါင်းစပ်နှင့်အတူ Metro လိုင်းသောမြို့တော်မြို့တော်ဝန် Recep Altepe ချိတ်ဆက်အဓိကထားလမ်းရထားလိုင်းများအားလုံးခရိုင်စတင်ခဲ့ပြီးအဖြစ်မကြာမီသူတို့ဖြည့်စွက်ရန်လုပ်ဆောင်နေအချိန်ပိုဖြုန်းအဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်စေဘဲ T-1 လိုင်းစင်မြင့်၏Altıparmakအကောင်အထည်ဖော်ရေးအရေးကြီးဆုံးကဆိုသည်။ အားကစားကွင်းလမ်းကို T-1 လိုင်း, ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နင်္ဂနွေနေ့ကတဆင့်နှင့်ဇာတ်စင်ပေါ်တွင်အလုပ်စတင် Altepe ပြီးနောက် Darmstadt လမ်း Altiparmak ဇာတ်စင်၏ဆင်တူသည်လမ်းရထားလမ်းxnumx'lıkရာခိုင်နှုန်းတင်သောကဆိုသည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Altepe, "တစ်ပါတ်အကြာစတင် ...
လမ်းကြောင်းအပေါ်Altıparmak Bursa ပြောင်းလဲမှု '' 06 / 11 / 2012 မျဉ်း Altepe အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ Bursa တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် T1 Altiparmak ဇာတ်စင်, Altıparmak 20 ရက်ပေါင်းပြီးစီးခဲ့ခံရဖို့အလုပ်၏မျက်နှာကိုနောက်ပိုင်းမှာလုံးဝပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဤကာလ၏ပေါင်းစပ်နှင့်အတူ Metro လိုင်းသောမြို့တော်မြို့တော်ဝန် Recep Altepe ချိတ်ဆက်အဓိကထားလမ်းရထားလိုင်းများအားလုံးခရိုင်စတင်ခဲ့ပြီးအဖြစ်မကြာမီသူတို့ဖြည့်စွက်ရန်လုပ်ဆောင်နေအချိန်ပိုဖြုန်းအဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်စေဘဲ T-1 လိုင်းစင်မြင့်၏Altıparmakအကောင်အထည်ဖော်ရေးအရေးကြီးဆုံးကဆိုသည်။ အားကစားကွင်းလမ်းကို T-1 လိုင်း, ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နင်္ဂနွေနေ့ကတဆင့်နှင့်ဇာတ်စင်ပေါ်တွင်အလုပ်စတင် Altepe ပြီးနောက် Darmstadt လမ်း Altiparmak ဇာတ်စင်၏ဆင်တူသည်လမ်းရထားလမ်းxnumx'lıkရာခိုင်နှုန်းတင်သောကဆိုသည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Altepe, "တစ်ပါတ် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Kayaş-မြစ်-KIRIKKALE - CETINKAYA လြှပျစစျမီးစက်ရုံတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ 16 / 04 / 2012 Kayaş - မြစ် - KIRIKKALE - CETINKAYA လြှပျစစျမီးကိုဖန်ဆင်း TC ပြည်နယ်မီးရထားအထွေထွေညွှန်ကြားမှု (TCDD) Kayaş - မြစ် - Kırıkkale - Cetinkaya လြှပျစစျမီးဖွဲ့စည်းပုံမှာဆောကျလုပျရေးလုပျငနျး 4734 အမှတ်အပိုဒ်အများပြည်သူဝယ်ယူရေးပညတ်တရား၏ 19 အားဖြင့်ပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2012 / 37411 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: TALATPAŞA BULVARI NO:306330 GAR ALTINDAĞ-တူရကီခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3123090515-239, 4139, 4409 - 3123115305 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: TCDD @ ပစ္စည်း။ https: //ekap.kik.gov.tr/ekap / ... gov.t သုံး) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်းကိုအင်တာနက်လိပ်စာတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်ဖြစ်ပါသည်
ÇETİNKAYA-Edirne အခြေခံအဆောက်အအုံများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အလုပ်မှာတင်ဒါအကြား LINE-HORASAN Köprüköyဘူတာရုံ KM.1223 ၏ဆောင်းဦးအဆင့်တွင် + 0000 1225-500 03 / 08 / 2012 တာဝန်ရှိလေလံ: Ismail Karahan လေလံ Manager ကိုဖုန်းနံပါတ်: 346221 70 00 / 4171 လေလံ Manager ကိုဖက်စ်: 346 221 32 54 Ilan နေ့စွဲ: 23.07.2012 00: 00: 00 လေလံနေ့စွဲ: 14.08.2012 00: 00: 00-10: 30 သတ်မှတ်ချက်ကုန်ကျစရိတ်: 100,00-TL တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်း: တင်ဒါအကြောင်းအရာအလုပ်လုပ်: ဆောက်လုပ်ရေးမှတ်ပုံတင်ခြင်းအဘယ်သူမျှမထုတ်ဝေ: 2012 / 90098 မေးလ်: tcddsivasyolmd@hotmail.co အခြေခံအဆောက်အအုံများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စီးပွားရေးဝယ်ယူရေးအသိပေးစာ STATE ရထားလမ်းသမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူး (TCDD)4။ REGION လမ်းညွှန်ကြားမှုÇETİNKAYA-Edirne အခြေခံအဆောက်အအုံများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် 1223 အမှတ်အပိုဒ်အများပြည်သူဝယ်ယူရေးပညတ်တရား၏ 0000 အားဖြင့်ပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည်ကြားရှိဆောင်းဦးရာသီအဆင့် LINE Köprüköy-HORASAN ဘူတာရုံ KM.1225 + 500-4734 + 19 ။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2012 / 90098 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Muhsin Yazicioglu BULVARI NO:2SÝVAS ...
Ude ငါ Hakan Yalcinkaya Sen-Sen Zonguldak ပြည်နယ်ဥက္ကဋ္ဌခနျ့အပျခံ 26 / 05 / 2018 ပို့ဆောင်ရေးနှင့်မီးရထားအလုပ်သမားများသမဂ္ဂ (Ude ငါ Hak-Sen) Zonguldak ၏သမ္မတထူးချွန်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အောင်မြင်မှုလပ်ြရြားမြအရာရှိချုပ် Sener Yalcinkaya တာဝန်ကျခဲ့တယ်။ မည်သည့်နိုင်ငံရေးပါတီကိုထောက်ခံသူတွေအရည်ပျော်သို့မဟုတ်အမိန့်olmayacaktır Mecucut အလုပ်သမားသမဂ္ဂခံစားရတဲ့နစ်နာမှု်ခံမှုအတွက်ဘာသာရပ်ချွတ်တည်းခို, သူတို့ကွဲပြားခြားနားသောလမ်းကြောင်းအတွက်အရှည်ပြသပေးသောနိုင်ငံရေးသဘောတာဝန်များကိုများမှာအဓိကအားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခဲ့ပါဘူး Ude ငါ Hak-Sen, သင်အမြဲလုပ်သားများသယ်ယူပို့ဆောင်နှင့်၎င်းတို့၏ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းချက်ကိုရှာဖွေလာမယ့်ပါပြီ Ude ငါ Hakan UT ခဲ့ကြသည်။ Yalcinkaya Sen Zonguldak ငါတို့ညီ, ငါတို့ကအခြားဒေသဆိုင်ရာဌာနမှူးကုန်သွယ်ရေးအလုပ်သမားသမဂ္ဂသမ္မတနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့သမ္မတမရှိတော့သည်ဤစံသတ်မှတ်ချက်မဆိုသံသယရှိပါလိမ့်မယ်။ Zonguldak ပြည်နယ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမ္မတ ...
လမ်းကြောင်းအပေါ်Altıparmak Bursa ပြောင်းလဲမှု ''
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Kayaş-မြစ်-KIRIKKALE - CETINKAYA လြှပျစစျမီးစက်ရုံတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ
ÇETİNKAYA-Edirne အခြေခံအဆောက်အအုံများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အလုပ်မှာတင်ဒါအကြား LINE-HORASAN Köprüköyဘူတာရုံ KM.1223 ၏ဆောင်းဦးအဆင့်တွင် + 0000 1225-500
Ude ငါ Hakan Yalcinkaya Sen-Sen Zonguldak ပြည်နယ်ဥက္ကဋ္ဌခနျ့အပျခံ
သင်္ကေတပြမှုနှင့်အတူတိုင်းမှ Dubrovnik အင်ကာနည်းလမ်းများ
ဥပဒေရေးရာ Boulevard စတင်နေပြီ Etap ဖွင့်ပွဲအဆင့်
Ahmet ထင်ပေါ်ကျော်ကြား Yilmaz: Bursa လမ်းရထားနူးညံ့ ထွက်. ပြောင်းလဲမှုကစတင်ခဲ့သည်
ရှောလမုန်မင်းစတား: TCDD အတွက်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်